October 2021 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Oct 31, 2021 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 26-03-1443,…
Dhageyso Warka Duhurnimo Ee Radio Al-Furqaan
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Axad,Taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Dhageyso Warka subaxnimo Ee Radio Al-Furqaan
Axmad	 Oct 30, 2021 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 25-03-1443,…
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Sabti,Taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Ku Dhawaad 10 Askari oo Puntland Looga Dilay Af-urur.
cusmaan	 Oct 30, 2021 0
Ciidamo ka tirsan milatariga Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ee Buuraha Golis ayaa saaka weeraro kula jarmaaday askar ka tirsan kuwa maamulka Puntland oo ku socdaalayay meel u dhow saldhigga ay ku leeyihiin deegaanka Af-urur oo…
Sawirro: Maamulka Islaamiga Ah Ee Salagle Oo Ku Guuleystay Daminta Dab Ka Kacay Xarumo Ganacsi.
Maamulka islaamiga ah ee degmada Salagle ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku guuleystay daminta dab ka kacay xarumo ganacsi oo ku teedsan suuqa degmada. Dabkan oo ka dhashay feero ayaanan wax khasaare nafeed ah geystan balse wuxuu geystay…
Dowladda Zambia Oo Xabsiga Dhigtay Soomaali badan Oo ku Nool Dalkaas.
Wararka ka imaanaya dalka Zambia ayaa ku waramaya in ciidamada wadankaas ay xabsiga dhigeen dad badan oo Soomaali ah oo kamid ah soomaalida wadankaas ku nool. Ciidamada ammaanka ee dalka Zambia ayaa maalmihii tagay ee lasoo…
Dagaal Culus Oo Ka Socda Deegaanka Af-Urur ee gobolka Bari.
Dagaallo xoogan ayaa deegaanka Af Urur ee gobolka Bari waxa uu ku dhexmarayaa ciidamo katirsan milliteriga Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa maamulka Puntland. Dagaalka ayaa ah mid aad u culus oo la isku adeegsadanayo hubka…
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 23-03-1443.